Omaar al-Baashir: Pirezidaantiin duraan Sudan 'Saawudiirraa maallaqa miliyoonotaan fudhateera' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Omaar al-Bashir Wiixata mana murtiitti dhiyaatan
Polisiin dhimma Omaar al-Bashir qorataa jiru pirezedaantiin Sudaan duraanii kun Saawud Arabiyaarraa dolaara miliyoonotaan fudhachu amaneera jechuun mana murtiitti hime.
Mr Bashir himannaa malaamaltummaan irratti dhiyaateef Kaleessa mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u, abukaatosaanii himannichi qabatamaa miti jedheera.
Al Basher hiriira mormii baatiiwwaniif gaggeefameen ji'a Eblaa aangorraa buu'uun, turtii isaa kan waggaa 30 xumureera.
Waxabajjii keessa ammoo maallaqni sharafa alaa hedduun mana jireenyaasaa keessaa kuntaala midhaaniin argameera jedhe abbaan alangaa.
Eertiraafi Sudaan daangaa cufame banuufi
Dilbata darbe ammoo qaamoleen akka dimokiraasiin biyyattiitti dhufu hojjetaniifi manni maree humna waraanaa biyyattii Mr. Bashiriin aangoorraa kaasan daandii filannootti geessu waliin tolfachuuf waliigaltee mallatteessaniiru.
Pirezedaantiin duraanii kun uffata adii uffachuun turbaana mataatti godhatanii ture kan mana hidhaa keessaan mullatan.
akka Reuters gabaasetti garuu yaada tokkollee hin kennine.
Maqaa isaa sirrii ta'uu gaafatame murteessuu qofaaf kan dubbate al-Bashir bakka jiraataa ture yeroo gaafatametti ni kolfe jechuun Reuters dabalee addeesseera. "Dura naannoo buufata xiyyaaraa bakka waajira muummee waraanaa amma garuu mana hidhaa Kobar keessan jira," jechuun deebise.
Poolisiin qoratu Ahmed Ali Mohamed mana murtiitti akka himetti Mr Bashir ilma mootii Sawudii Arabiyaa Mohammed Bin Salman irraa dolaara miliyoona 25m akka fudhate amanuu isaati.
Goodayyaa suuraa Bashir yeroo firoota isaa dubbisutti
Pirezedaantiin Sudaan duraanii umuriin isaanii ganna 75 ta'e kun Sawud Arabiyaarraa maallaqa biraallee akka fudhateeru hime qorataan kun.
Abokaatoon Mr. Bashir Ahmed Ibrahim ammoo "maallaqa seeraan alaa fudhate jedhamee kan Bashir irrattti dhiyaate ilaalchisee odeeffanoofi ragaan hin jiru," jedheera.
Himannaan malaammalummaa kun maal ture?
Mr Bashir kan himanni irratti banameef "maallaqa sharafa alaa qabaachuu isaaniitiifi malaammaltummaafi kennaa karaa seeraan alaa fudhachuudha."
Ebla keessa, gaggeessaan humna waraanaa Sudaan Janaraal Abdel Fattah al-Burhan akka jedhetti maallaqani Paawondii Sudaaniin tilmaamaan dolaara miliyoona 113 akka ta'u tolmaamamuufi maallaqa biyya alaatiin mana Mr. keessatti argamee ture.
MM Dr Abiy 'mariidhaaf' Sudaan akka deeman egamaa jiru
Pirezedaantiin aangorraa kaafaman kun Adoolessa keessa mana murtiiti kan dhiyaatan yommuu ta' rakkoo nageenyaatiif jedhamee darbeera.
Mr. Bashir himannaawwan akkamiitu Sudaan keessatti isa eeggataa?
Caamsaa keessa, abbaan alangaa ummata Sudaan Mr. Bashir okara kaasuufi mormitoota ajjeessu keessatti qooda qabu jechuun himatee ture.
Himannichis jalqaba kan dhiyaate yeroo mormiitti doktorri tokko ajjeefamee gara mormii cimaatti ce'edha.
Goodayyaa suuraa Mormitoota Sudaan Adoolessa 2019
Doktorri ajjeefame sun osoo mormitoota madaa'an mana jireenya isaa Kaartuum keessatti argamu keessatti wallaanaa jirutti ture kan ajjeefame. Kunis yeroo poolisoonni gaaza imimmaansu gamoo sanatti dhukaasanitti ture kan mudate.
Namni ijaan argae akka BBC'tti himetti, doktarichi harka ol qabatee gadi ba'aa ture. Doktora akka ta'es ni argama ture garuu batalumatti rukutame jedhe.
Adeemsi gara dimokiraasitti ce'uu ammoo maal fakkaata?
Adeemsi murtii Mr Bashir hangam aanga'oonni haaraan yakkawan darban keessa turan ilaaluun haqaf dhiyeessuu danda'an irratti ilaalamanidha.
Sanbata darbe manni maree humna waraanaa, warri erga Mr. Bashir aangoorraa bu'ee angoo qabataniifi mormitoonni warri sivilii ta'an aangoo waliif qooduudhaaf waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigalteen mallattaa'e sunis seena qabeessa jedhameera.
Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo p
Waaliigalteen irra ga'ame sun mana maree mootummaa haaraa warra siviliiyaaniifi janaraalota waranaan waliin ta'uudhaan gara filannoofi mootummaa dimokiraatawaa ta'e uummachuutti deemuuf gargaara.
Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagolo, yeroo hedduu akka Sudaanitti nama hunda caalaa cimaa ta'etti yaadama. Waadaa galamee hojiirra akka oolu uqabus kakateera.
Manni maree haaraaijaarame kunis Wixata kakuu raawachuudhaan hojii jalqaba jedhamee tures, sirni kun gaaffii gareen warra dimokiraasii deggeranii akka achi siqu gaafataniif yeroon isaa darbeera.
Lammiileen Sudaan waliigaltee mallataa'ef gammachuu ibsatan
Barattoonni ajjeefamnaan Sudaan manneen barnoootaa cufte
Viidiyoo Mormii Sudaan: Ajjeechaa Sudaan Viidiyoo uummataan
Viidiyoo "Mallattoo mormii Sudaan ta'uuf yaada hin qabun ture" - Alaa Saalaah